Umvukuzi. To Idlalwa kanjani iMinesweeper. Emulator.ku-inthanethi
Umvukuzi. Idalwe ngamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye, iMinefield yafika kwiWindows amashumi amathathu nanye kuphela emashumini ayisishiyagalolunye nambili futhi isamangaza abadlali abaningi namuhla. I-interface yayo iguquke kakhulu eminyakeni edlule, kepha imishini yomdlalo ihlale ingaguquki. Ngibheja ukuthi yilokhu onentshisekelo kukho: ngoba okuhlangenwe nakho kwakho kwangaphambilini akukulethelanga imiphumela emihle kakhulu, ungathanda ukuqonda ngokuningiliziwe ukuthi ungayidlala kanjani iMinesweeper.
Ngomunye waleyo midlalo wonke umuntu, okungenani kanye empilweni yakhe, ayidlalile. Yayifakwe cishe kuzo zonke izinhlobo zeWindows kuze kufike kweziyisishiyagalombili, lapho iMicrosoft yanquma ukuyisusa futhi Isizungu nezinye izinto zokuzilibazisa ezifakwe ngaphambilini kusistimu yakho yokusebenza eminyakeni edlule. Abanye bayibiza futhi inkundla yezimayiniEqinisweni, lokhu kungukuhluka komdlalo (ofanele ngokwezepolitiki) owethulwe ngeWindows XNUMX obukhipha cishe ama-quirks afanayo.
Eqinisweni, esifundweni sanamuhla, ngizochaza ukuthi ungayithola kanjani futhi uyidlale kanjani iMinefield ngokukhuluma ngenguqulo yakamuva yeMinefield mahhala mahhala esitolo seWindows XNUMX, nayo ethintekayo. futhi ungaxhuma ku-Xbox Live ukuze wabelane ngentuthuko yakho. Yizame futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi ngeke uzisole! Uma unganelisekile ngempela, ngeke ngiyeke ukukwazisa ezinye izindlela ezivumelekile ze-PC, i-smartphone ne-tablet. Ukufunda okujabulisayo futhi ngaphezu kwakho konke, kukujabulele!
Umvukuzi | | I-Minesweeper Online
Kunguqulo yakamuva yomdlalo okhishwe yiMicrosoft kunezindlela ezi-2 ezitholakalayo: lokho Classic, eveza ngokwethembeka izici zePrato fiorito, nokuthi yikuphi i-aventura okuthe, ngakolunye uhlangothi, iveza izici ezintsha. Ake siqale ngesokuqala, yingakho ufunda lo mhlahlandlela.
En Imodi yendabuko yasemayini kukhona igridi ye- amabhokisi amboziwe, emele indawo lapho izimayini zingafihlwa khona: ukunqoba, kufanele usule isikwele ngasinye esingenalutho ngesikhathi esifushane ngangokunokwenzeka. Kule nguqulo, esikhundleni sezimayini, uzothola ama-ladybugs, kepha umsebenzi awushintshi. Ngaphandle kokususa izikwele ngokuchofoza (noma ngokuthepha), ungamaka lezo ocabanga ukuthi zifihle imayini bese uzivimba, ukuze ungazicishi.
Unganamathisela eyodwa ifulegi elibomvu kulawa mabhokisi ngokuchofoza kwesokudla kwegundane noma ukuthinta okude: ukuphinda lesi senzo, esikhundleni samafulegi, a uphawu lombuzo ophuzi okuzokwenza "uvule" amathayili akhethiwe futhi ikuvumele uwakhulule. Ukunqoba, kufanele ususe isikwele ngasinye esingenamayini, ngaphandle kokuqhumisa imayini eyodwa.
Kunamazinga amathathu obunzima ongakhetha kuwo: saqala, maphakathi y kuthuthukile. Ukwahlukanisa yinani lezikwele nezimayini kugridi: izikwele eziyisishiyagalolunye x eziyisishiyagalolunye ezinamamayini ayishumi kwelokuqala, ishumi nesithupha × ishumi nesithupha ngamashumi amane elesibili namashumi amathathu × ishumi nesithupha kanye namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kwesithathu. Ungakhetha futhi ukudlala izinga nge ama-grid wesiko, lapho ongakhetha khona ukuthi mangaki amabhokisi okufanele ungene kuwo I-Altura, ububanzi kanye nenani lezimayini noma Coccinelle. Ukuhlukahluka okuyisishiyagalombili kuya kweziyisishiyagalombili kwezimayini akusekho mahhala.
Iningi lamabhokisi amahhala awanalutho, kepha amanye ane- inombolo 1 kuye ku-6: ziyizinkomba ezibalulekile, ngoba zikhombisa ukuthi mangaki amamayini akuleyo ndawo. Kungcono ukusula amabhokisi aseduze nalawo angenayo inombolo ngaphakathi bese umaka ukuthi "ayingozi" lawo aseduze kwesihlanu noma isithupha. Ngaphezu kwalokhu, kufanele uthembele enhlanhleni yakho, ngoba azikho ezinye izeluleko ezihlukile noma amaqhinga wokuwina iMinefield. Kuyinto enhle ngempela puzzle game!
Imodi i-aventura Kuyinto eseyintsha ethokozisayo futhi ingabonakala njengomdlalo ohluke ngokuphelele, yize igcina izici ezithile zommisi wamasiko wendabuko. Lapha, umvukuzi udlala indima yokudlula ochungechungeni lwemigudu ehlanganisiwe (ngayinye imele izinga), imayini amabhokisi asendleleni. Esikhundleni sezimayini, izicupho zifihliwe: uqala ngempilo engu-3 futhi ungathola okuningi ngokuqoqa izinhliziyo. Izinhlamvu zemali zandisa amaphuzu.
Imodi ye-adventure "iyakhungathekisa" kunaleyo yendabuko, ngenxa yokuthi uma uthola isicupho usenamanye amathuba ama-2 okugcwalisa ileveli. Ukuba khona kwezinhlamvu zemali nezinye izinto zokuhlanganiswa ukuvula iminyango ye-maze (ukuqhubeka kufayela le-i-aventura) kwenza ulwazi lokudlala lukholwe ngokwengeziwe: amabhokisi azovulwa ngaso sonke isikhathi angaqukatha inombolo yokukhomba yezicupho eziseduze nemishini ifana ncamashi njengoba kuchaziwe ngaphambili.
Ngaphezu kwezinhlamvu zemali, umvukuzi angaqoqa legolide y i-armas bulala abaphikisi futhi ubhubhise izingibe endleleni yakho: ngasinye salezi zenzo sisiza ukukhulisa amaphuzu womdlalo. Awekho amafulegi noma amamaki ombuzo, kepha kunezimpawu ezibomvu nezimhlophe ezine- uphawu lokubekisa, ezinenhloso efanayo futhi ezenziwa zisebenze ngokuchofoza kwesokudla noma ukuthinta okude.
Entsha ayigcinanga lapha, njengoba iMinefield manje isinikeza nokuqinisekile Izinselele zansuku zonke Kususelwa kumodi ephelele yendabuko futhi ikuvumela ukuthi ukhuphuke ibhodi yabaphambili yanyanga zonke yamabhonasi angasetshenziswa kumdlalo. Lezi zinselelo zansuku zonke zingatholakala ekhasini eliyinhloko lomdlalo futhi kuhlongozwa ukugcwalisa izenzo ezahlukahlukene: ukusebenza njengesibonelo, kwenye inselelo kungadingeka ukuthi umake izimayini eziyishumi ngamafulegi (ngaphandle kokukhipha ibhokisi) nakwenye ukuze unyathele izimayini.
Izinselelo zinikeza izihlangu ezi-4 zethusi, isiliva, igolide nedayimane, kuya ngenqubekela phambili yanyanga zonke. Izinga lokuyinkimbinkimbi likhombisa imodi yakudala - unganqoba inselelo njengomqali, maphakathi noma okunye uchwepheshe.
Ngaphezu kwemiklomelo eyingqayizivele, ebhekisa kakhulu enguqulweni ye-premium yomdlalo (engizokhuluma ngayo kungekudala), iphuzu ukufinyelela imigomo I-Xbox Live
Yebo, ufunda lelo lungelo! IMinefield ayikwazi ukudlalwa kumakhonsoli e-Microsoft, kepha ungathola amaphuzu ku-akhawunti yakho ye-Xbox Live! Manje, nokho, ukukhuluma okwanele: isikhathi sesifikile sokuqonda ukuthi ungayifaka kanjani iMinesweeper kwikhompyutha yakho.
Ezinye izindlela zokusebenzisa iMinesweeper
Manje sengizochaza okuthile Ezinye izindlela eziya enkundleni yezimayini ongakhetha kuzo uma unganelisekile ngeMicrosoft Minesweeper.
I-Minesweeper: Okubalulekile (Windows XNUMX)
Inketho yokuqala engiyiphakamisayo yile I-Minefield: okubalulekile, uhlelo lwamahhala ongaluthola esitolo esisemthethweni seWindows XNUMX nokuthi ungasifaka ngokuchofoza inkinobho thola. Akukho ukuthenga okungeziwe noma izikhangiso kuyo yonke imidlalo. Noma kunjalo, imodi ye-Adventure ayitholakali. Kuyidlelo lezimbali lendabuko elinamazinga amathathu okuyinkimbinkimbi achazwe ngaphambilini futhi elilodwa lishintshiwe.
Ubukhulu bamagridi nenombolo yezimayini ezingeni ngalinye kujwayelekile, ngakho-ke, kuyefana naseMayini yeMicrosoft. Ukwenza ngokwezifiso kwegridi nakho kunikeza amanani afanayo ncamashi: amagama ayashintsha, ngenxa yokuthi lapha ungakhetha phakathi kwamamodi fácil, abezindaba noma okunye difícil. in izinketho Uzothola izingqikithi ezi-3 ukwenza ngezifiso ihluzo zomdlalo nezilawuli ezithile ezihlobene nesibali sikhathi, imisindo nombuzo wombuzo ojwayelekile. Kubaluleke ngempela njengoba isihloko sethembisa.
Le ndawo yezimayini inikeza uhlelo lwe izibalo kumaphuzu afinyelelwe kule midlalo, kepha awukwazi ukuxhuma ku-Xbox Live ukuze wabelane ngawo nabangane: uma umane ufuna ukudlala iPrato Fiorito, angicabangi ukuthi lokhu kungaba yinkinga. Ngokuphathelene nemishini yemidlalo, ukunyakaza kuyefana nalokho kwegeyimu ye-Microsoft: ukuchofoza noma ukuthinta ukukhipha amabhokisi, ukuchofoza kwesokudla noma ukuthinta okude ukuwabeka uphawu. Okulula, akunjalo? Ihluzo nazo zihle impela.
Umvukuzi! (Amawindi ayishumi)
Inketho yesibili ehlukile engikuphakamisa yona, Umvukuzi!Ifanele indawo yangempela yezimayini ezingekho emthethweni. Ihluzo akuzona ezihamba phambili impela, kepha umdlalo uveza izici zangempela zoqobo lweWindows: njalo futhi kuzo zonke izimo ungayithola ku-Microsoft Store.
Kukhona ama-grid ama-4 (njalo futhi kuzo zonke izimo ahlukaniswe yizinga lobunzima), okungukuthi fácil, medio, difícil y amaphupho amabi. Lapha akunakwenzeka ukwenza ngezifiso ubukhulu futhi inani lamabhokisi azokhishwa lihluke kakhulu kumazinga.
Kumodi elula ephelele, igridi izikwele eziyisishiyagalombili nezishiyagalolunye ezinezimayini eziyishumi; maphakathi no-10x12 ngezimayini ezingamashumi amabili; ebunzimeni obulingene nambili x neshumi nane ngezimayini ezingamashumi amathathu naseNightmare eziyishumi nantathu × eziyishumi nanhlanu ezimayini ezingamashumi amane. Imishini yomdlalo iyisisekelo: noma ikuphi ukuchofoza noma ukuthinta kukhipha ibhokisi elifanele, ngaphandle kokumaka abasolwa. Umdlalo uhunyushelwa olimini lwesiNtaliyane, kepha kufayela le- izilungiselelo Ungashintsha futhi ulimi noma ingemuva lewindi: ukufinyelela, mane uchofoze kusithonjana ikhabethe esenkabeni engezansi.
Uma usebenzisa iMac, ungadlala iMinefield ngokufaka uhlelo lokusebenza lwamahhala lwegama elifanayo ku-Mac App Store, ongayifaka ngokucindezela inkinobho Thola / Faka, etholakala engxenyeni engaphezulu kwesokudla futhi iziqinisekisa, uma kunesidingo, ngokusebenzisa iphasiwedi i-ID yakho ye-Apple noma I-ID yokuthinta (uma iMac yakho inenzwa yezigxivizo zeminwe).
Omakhenikha bomdlalo bayafana ncamashi nasenkundleni yezimayini zendabuko, nephethini yezimayini eziyishumi × eziyishumi nambili namashumi amabili. Ukulungisa amasethingi wegeyimu, kufanele ucindezele isithonjana ikhabethe etholakala enkabeni engezansi bese ukhetha isici izilungiselelo kusuka kumenyu evulayo.
Idlalwa kanjani iMinesweeper Online
Ukudlala i-Minesweeper ngokufaka uhlelo kukhompyutha yakho kulula kakhulu, kepha ungahle ungazizwa uthanda ukuthatha isikhala sediski salowo mdlalo. Ngakho-ke kungani ungadlali ngqo ku-inthanethi? Kuwebhusayithi kunezindawo eziningi ezikuvumela ukuthi ukwenze: enye yazo I-Minesweeper online ebuye ibe nenguqulo ekhokhelwe kuhlelo lokusebenza lwesitolo. Ngikuphakamisa lokhu kuwe ngoba inemidwebo efanayo nezilawuli njengendawo yezimayini yasekuqaleni yeWindows.
Le ndawo ngesiNgisi, kepha awudingi ukwazi ulimi ukuze ukwazi ukudlala. Ama-grid anobukhulu obujwayelekile beMicrosoft Minesweeper: ngokuchofoza ku- ukudlala, etholakala phezulu ngakwesokunxele, ungakhetha phakathi saqala, maphakathi y uchwepheshe, ezihambelana ne-Beginner, Intermediate and Specialist. isiko kungenxa yemodi eguqulwe ngokuphelele, lapho ungasetha khona I-Altura (Ukuphakama) ububanzi (Ububanzi) futhi izimayini (Eyami). Ukumaka a brand kusayithi lakho, nika amandla uphawu lombuzo.
Oomatshini bemidlalo babona kusengaphambili ukuchofoza kwesobunxele ukukhulula izikwele kanye nelungelo lokuzimaka: ngokuchofoza ku- Izilawuli buka isifinyezo sezinqamuleli zakho nezinyathelo zakho zekhibhodi. Inketho iyathakazelisa ukubona lokho kukuvumela ukuthi ulinganisele noma uhambise igridi kusuka kumaphesenti ayikhulu kuye kumaphesenti angamakhulu amabili.
Imodi yasebusuku esikhundleni salokho, shintsha ingemuva lendawo futhi unciphise ukubenyezela kwewindi ukonga amandla ubusuku bonke.
Uhlelo lokusebenza lwe-Minefield
Ngikuchazelile ukuthi ungayidlala kanjani iMinefield kwikhompyutha naku-inthanethi, kepha uma ufuna ukukwenza kusuka ifoni ehlakaniphile noma okunye ithebhulethi? Ungakhathazeki: kunezinhlelo zokusebenza eziningi zamahhala ezikuvumela ukuthi udlale ku-Android naku-iOS futhi. Abanye banamabha wokuvuselela!
I-Minesweeper: Umqoqi (Android / iOS): ukwahlukahluka kwenkundla yezimayini yendabuko, ngaphandle kokuthi inamagridi ezimo ezingezona izikwele noma onxande, afaka amazinga nokuqoqwa.
Umhlaba jikelele (I-Android / iOS) - ukhathele imigoqo enezinhlangothi ezimbili? Nge hlelo lokusebenza ungadlala emikhakheni kanye cubes. Ukuhluka kweMinefield ngokuphelele ukuze kuhlolwe.
Umhlaba wezimayini (I-Android / iOS) - zungeza izimayini emabalazweni wamazwe eplanethi ngalokhu kuhlukahluka kwemayini yezimayini ekumema ukuthi ubuyekeze ukuma kwezwe.
Ungayifaka kanjani iMinefield ku Windows 10
Ngifunde ukudlala, sekuyisikhathi sokuchaza Ungayifaka kanjani iMinefield ku Windows 10. Umdlalo umahhala esitolo sohlelo lokusebenza lweMicrosoft, ngakho-ke okumele ukwenze cindezela inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ngokubhala thola ekhasini elisemthethweni le-Microsoft Minesweeper.
Uhlelo lokusebenza, njengoba sekushiwo, lumahhala, kepha kukhona okuqukethwe okukhokhelwayo okusizayo okungavulwa ngemuva kokufakwa: ungabhalisela okubhaliselwe kwe-premium inyanga eyodwa ngama-euro ayikhulu namashumi amane nesishiyagalolunye noma unyaka owodwa kuma-euro ayisishiyagalolunye. Ngeshwa, umdlalo uqukethe amabhanela futhi ukuphoqelela ngezikhathi ezithile ukuthi ubuke amavidiyo wokuphromotha wemizuzwana embalwa ongeke ukwazi ukuwasusa. Isixazululo kuphela okudingeka usidlule ukubhalisa. Ezinye izinzuzo zokubhaliselwe yizinhlamvu zemali ezisizayo (okuyizinselelo) nezinto ezikhethekile zemodi ye-Adventure ephelele.
Uma sesikushilo lokho, ake sithathe isinyathelo! Ukulanda kuqedile, qala IMicrosoft Minesweeper ngesithonjana sayo kwimenyu yokuqala bese uqala umdlalo ku Imodi yakudala noma kufayela le- Imodi ye-adventure, bese ucindezela amabhokisi afanele ezingeni olifunayo lobunzima: saqala, maphakathi noma okunye uchwepheshe.
Iwindi eliyinhloko laseMinefield, elinganwetshwa libe yisikrini esigcwele ngesithonjana esinemicibisholo emi-2 ngaphezulu ngakwesokudla, liskrola ngokuvundlile: ngokuliphenya liye ngakwesobunxele, ungathola izibalo zemidlalo nezinhloso ze-Xbox Live ezifinyelelwe. Unganyakaza izingqikithi kuphela ngenguqulo ekhokhelwe ye-premium: enguqulweni eyisisekelo kuvela eyodwa ezenzakalelayo kuphela.
Kodwa-ke, ukuze ufinyelele ekucushweni kwe-minefield, kufanele uchofoze kusithonjana esinxeleni esingenhla bese ukhetha isici izilungiselelo kusuka kumenyu ohlongozwayo kuwe: lokhu kuzovula iphaneli eseceleni lapho ungaguqula khona i- ongakhetha umdlalo.
Ungaguqula ivolumu futhi wenze kusebenze noma usebenze izixwayiso, ngenkathi ungakhetha ngokushesha ukuthi ufuna ukusebenzisa i noma cha. amamaki emibuzo. Uma ikhompyutha yakho ikuvumela, ungahlela futhi thinta futhi i ihluzo futhi ungenza kusebenze ushintsho lwe imodi esheshayo kanye / noma imiyalo ukuthutha. Ekugcineni, ungakhetha ukubuyisela izilungiselelo ku- izilungiselelo ezizenzakalelayo noma okunye setha kabusha izibalo yomdlalo.
Isici sokugcina engingathanda ukusinaka. I-Xbox Live- Uma usuvele ubhalise iphrofayili ngenxa yokuthi une-Xbox console, ngeke udinga ukwenza lutho futhi lapho ufinyelela ekugcineni, uzokwaziswa kwideskithophu. Uma ungenayo i-akhawunti okwamanje, angikweluleki ukuba uyibhalise ngoba ngeke iklonyeliswe.